Izindwangu & Imfashini Factory | I-China Headwear & Fashions Abakhiqizi nabahlinzeki
I-bandana yangokwezifiso enanoma iyiphi iphethini yokuphrinta noma idizayini noma ilogo yenkampani yakho kuyo ingenza umsebenzi omuhle ekukhuthazeni ibhizinisi lakho! Okwamanje, ingasetshenziswa futhi njengesifihla-buso sobuso ukusiza ukuvimbela uthuli nomoya ongcolile. Kungukuphakanyiswa kwangaphandle okuphelele kwabagijimi, abahamba ngezinyawo, abagibeli bezintaba, abagibeli bamabhayisikili, nabathandi bempilo yazo zonke izinhlobo.
Uzama ukunaka inkundla? Ufuna ukuphromotha umkhiqizo negama lakho? Layisha izithombe zakho ozithandayo noma ilogo bese usitshela imibono yakho yokuklama manje, sizokwenza ngokwezifiso imikhono yengalo ngendlela oyifunayo ngayo! Umbala ogcwele oprintwe nge-polyester ethambile enwebeka, imikhono yethu yengalo ilungele imicimbi yezemidlalo, izipho zabasebenzi, njalonjalo.
Indwangu Yethebula Lomndeni Ngokwezifiso
Azikho izinto eziningi ezimnandi kakhulu kunokuhlangana uzungeze itafula ukuze ujabulele ukudla nomndeni noma nabangane. Indwangu yethu yetafula yangokwezifiso ingasiza ekwakheni isimo esingcono kakhulu futhi esifudumele. Ungaphrinta noma yiziphi izithombe, umbhalo noma imiklamo oyithandayo kuyo. Ngephethini ehlukile nezitayela zama-atrworks, le ndwangu yetafula iwumhlobiso omuhle wesigcawu esihlukile njengamadina asemthethweni, imikhosi yosuku lokuzalwa, nazo zonke izinhlobo zephathi yetimu.
Amakhava Esofa Angokwezifiso
Ngabe ufuna indlela esheshayo, elula nezomnotho yokuphinda uhlobise futhi uvuse ikhaya lakho? Lesi sembozo sosofa esilulekayo asikwazi nje ukunikeza ukubukeka okusha kukasofa wakho, singasiza futhi ekuvikeleni usofa wakho ekukhaleni kwansuku zonke, ekuchithekeni, kumabala nokunye. Kuyindlela enhle emakhaya anezingane nezilwane ezifuywayo. Futhi inge-plasticity eqinile ngenxa yendwangu eyelulekayo ne-band band design, ngakho-ke, ilungele izinhlobo / ukwakheka okuningi kosofa futhi ingakudalela umbono omuhle.
Ama-apron Aphrintiwe Ngokwezifiso
Ama-apron alungele ukukugcina uhlanzekile futhi uvimbela ama-micoorganisms. Ama-aprons ethu angaphrintwa ngokwezifiso ngemiklamo yakho, imibhalo noma ama-logo, ngakho-ke, akuyona ithuluzi elihle lokukugcina uhlanzekile lapho upheka noma wenza umsebenzi wasengadini, futhi kungasiza ekuthuthukiseni ibhizinisi lakho.
Isigqoko sethu senziwe nge-polyester ethambile ethambile. Ingasetshenziswa njengesifihla-buso sobuso, i-bandana, i-wristband, i-hood, uthayi wezinwele. njll ngezithombe noma ilogo oyithandayo ephrintiwe kuyo. Kungaba isesekeli semfashini futhi kube ithuluzi lokuheha iso ukwenza umkhiqizo wakho waziwe.
Izikhafu ezenziwe ngokwezifiso ziyindlela eyingqayizivele nenhle yokugqoka imiklamo yakho. Isikhafu esenzelwe wena futhi siyindlela enhle yokwethula ilebula lakho lomkhiqizo noma lomklami. Woza ukhethe amaphethini akho, imiklamo noma izithombe ozothatha isitayela sakho ezandleni zakho ngamaSkaves wethu aphrintiwe.